Nayakhabar.com: नेपालका चर्चित ७ हिरोइन , कसको तौल कति ?
नेपालका चर्चित ७ हिरोइन , कसको तौल कति ?
काठमाडौं । अमेरीकामा दुई महिना बिताएर आएकी अभिनेत्री केकी अधिकारी अमेरीका बसाईले निकै मोटाईन् । काम कम , आराम र खाना धेरै भएका कारण आफ्नो तौल बढेको भन्दै केकीले नेपाल आउने बित्तिकै फिटनेस सेन्टर ज्वाइन गरिन् । बिहान योगा, जुम्बासँगै दौडन थालिन् । साथै उनले खानपिनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिईन् र दुई महिना लगाएर ५ केजी तौल घटाइन ।
नेपाली अभिनेत्रीहरुको तौल र फिटनेसको कुरा खासै सुन्न पाईदैंन । तर, केकीले तौल घटाएको समाचारले मिडिया तताइरहेको छ । ५ केजी घटाएर केकी अहिले ५० किलो भएकी छन् । मिडियामा केकीको तौलकै कुरा चलिरहँदा हामीले अन्य अभिनेत्रीहरुको तौल कति छ, त्यसका बारेमा एक सामाग्री तयार पारेका छौँ ।
रेखा थापा – रेखा थापा त्यति साह्रो मोटी पनि छैनन् र स्लीम पनि छैनन् । तर उनले फिगर मेन्टेनको लागि खासै मेहनत गरेको पनि थाहा पाइएको छैन । अभिनेत्री रेखा थापा को तौल ५७ किलो छ । अभिनेत्री रेखा थापाले फिल्म हिरो बाट अभिनय यात्रा शुरु गरेकी हुन् । रामप्यारी रेखा थापाको पछिल्लो फिल्म हो ।
प्रियंका कार्की – २८ वर्षिया अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको वेट ५० किलो छ । प्रियंका आफ्नो फिmटनेसलाई निकै ध्यान दिन्छीन् । उनी नेपाली सिने उद्योगकी सफल नायिकाको सूचीमा छिन् । प्रियंकाद्धारा अभिनित फिल्म छक्का पंजा भद्रौ २४ गते रिलिज हुँदैछ ।
नम्रता श्रेष्ठ –अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठलाइ जिरो फिगर अभिनेत्री भनिन्छ । उनले फिल्म क्लासिकको क्रममा आफ्नो तौलबारे कुरा गर्दै आफू जम्मा ४४ किलो भएको जानकारी दिएकी थिईन् । विविध कन्ट्रोभर्सिलाई चिर्दै नम्रताले आफ्नो नाम सफल अभिनेत्रीको सूचीमा लेखिसकेकी छिन् ।
निशा अधिकारी – अभिनेत्री निशा अधिकारी पनि फिट अभिनेत्रीमा पर्छिन् । उनी आफ्नो सुन्दरता र फिटनेसलाई निकै ध्यान दिन्छिन् । निशा अधिकारीको तौल ५० किलो छ । सुनगाभा, अपवाद, पदमिनि, आभाष, धुँवा यो नशा निशाले काम गरेका केहि फिल्महरु हुन् । हिमाल आरोहण निशाको रुचिको विषय हो । उनले सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेकी छन् ।
निता ढुङगाना – अभिनेत्री निता ढुङनालाई सानो कदकी अभिनेत्रीका रुपमा चिनिन्छ । उनले फिटनेस मन्त्रका रुपमा नृत्यलाई अंगालेकी छिन् । बिहान उठेर एक घण्टाजती उनी नृत्य गर्ने गर्छिन् । निताको तौल ४७ किलो छ ।
स्वस्तिमा खड्का – स्वस्तिमा निकै स्लिम देखिन्छिन् । तर उनको तौल पनि नम्रता श्रेष्ठकै जति छ । उनी पनि ४४ किलोकी छिन् । उनले होस्टल रिटन्र्सबाट अभिनय यात्रा शुरु गरेकी हुन् । फिल्ममा काम गर्नु अघि स्वस्तिमा म्यूजिक भिडियोमा का मगर्थिन् ।